कफी पी व्यंजनों
कफी गरेको स्वाद अन्य बदलाव को यस्तो नम्बर मा विकसित गरेको छ, अन्तमा आफ्नो आत्म लागि प्राप्त गर्न उपभोग जो कि छनौटको कहिले काँही एक जोडदार काम हुन सक्छ. तर कफी घर सुलभ कफी पेय पदार्थ को आफ्नो सूची मात्र प्रमुख उपभोक्ताहरु द्वारा मदत गर्न हुनेछ, तिनीहरूले सजिलै सबै भन्दा राम्रो कफी पिउन विधि छान्न.
तपाईं र अन्य अलग एक मदत गर्न सक्ने जावा को विभिन्न प्रकार पाउन सक्नुहुन्छ. नियमित कफी छ, तत्काल कफी, java, कफी, दूध, Mocha, अमेरिकी, र हडताल.
सामान्य एस्प्रेसो – केवल कफी मैदान देखि तातो-पानी र अन्न आवश्यकता. त्यो मिश्रित र यो नष्ट हुन सक्छ अघि एक मिनेट वरिपरि स्वीकार गर्न छोडेर छ. उन को वाहेक, विशिष्ट कफी पनि सेतो वा केवल कालो हुन सक्छ. डार्क कफी यो कुनै थप फाईल छ, सेतो कफी केही क्रीम या डेरी मिसाएर सक्छ जबकि. दुवै बदलाव मा ग्लुकोज थप्दै पनि आफ्नो व्यक्तिगत रुचि निर्भर हुनेछ.
तत्काल कफी – दानेदार वा पाउडर छ कि कफी प्रयोग. यो कफी को आफ्नो कप सजिलो बनाउन चाहनुहुन्छ ती र बनाउन छिटो लागि उपयुक्त पेय छ (अब प्रतिबद्ध छ कि बियर अवधि). तपाईं यस तुरन्त पिए छ र पाउडर मिश्रण गर्न चाहिएको छौँ.
Java (इटाली उत्पत्ति) – जावा कफी फरक छ कफी संयोजन अचम्मको कफी मैदान तर केही प्रयोग. यो पेय अँध्यारो देखि लिएर सक्छ, मध्यम, decaffeinated र पनि भिन्न स्वाद छ लागि.
कफी – यो कफी पिउन जावा को एक फोटो समावेश र सामान्यतया माथि foamed दूध संग लेपित छ (यो को गर्मी समावेश मदत गर्न सक्छ), र जायफल देखि केही फैलियो पाउडर.
कफी (इटालियन मा डेरी) – धमाकेदार गरिसकेका सामान्य दूध संग गरे गर्नुपर्छ भनेर एउटा एस्प्रेसो प्रकारको (पनि यो माथि foamed दूध प्रदान गर्दछ) . त्यसपछि डेरी थप्न, त्यसैले तपाईं कफी स्वाद को बल तल सीटी गर्न चाहनुहुन्छ भने. तर तपाईं वरिपरि अर्को बाटो चाहन्छु गर्नुपर्छ, बस आफ्नो लाट्टे गर्न दुई-शट java थप्न.
Mocha (Yemen उत्पत्ति) – मूलतः सिमी बनाउनुभयो. साथै, यो कफी पेय वा कफी तुलना तर एक nicer संस्करण केही कुरा छ सकिन्छ. यो सामान्यतया सिरप वा केही तातो चकलेट पाउडर संग जोडा गर्नुपर्छ.
अमेरिकी (कफी सिमी प्रयोग) – एक अमेरिकन आदेश जब, कैफीन को बस एक शट संग भनेर आशा छ, तपाईं यसलाई अझ तातो पानी छ कि एक पेय भएको हुन जाँदैछन् (जावा को प्रकृति बढी कम एकाग्रचित्त पानी प्रयोग गरेर बनेको छ).
हडताल – त्यो सिर्फ एक एस्प्रेसो पेय संस्करण ठंडा. यो सामान्यतया केहि चोट बरफ मिसाएर गर्नुपर्छ, ग्लुकोज, तत्काल कफी, लोशन, र पानी.
सर्वश्रेष्ठ कफी पेय
कफी hottie | Café bombón बनाउन कसरी
खरीद आज लागि उपलब्ध कफी निर्माताहरु को विस्तृत विविधता.
कफी पेय को प्रकार
कफी को लोकप्रिय प्रकार